Bosch brushcutters - Ikkaro အတွက်နိုင်လွန်လိုင်းအပိုပစ္စည်းများကိုဘယ်လိုစျေးပေါနိုင်လဲ
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ပြင်ဆင်မှုများ >> Bosch brushcutters အတွက်စျေးသက်သာတဲ့နိုင်လွန်လိုင်းအစားထိုးနည်း
Bosch brushcutters အတွက်စျေးသက်သာတဲ့နိုင်လွန်လိုင်းအစားထိုးနည်း
၎င်းသည်သူ့ဟာသူပြုပြင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုက်ဆံချွေတာရန်အတွက်အနည်းငယ် hack သည်။ Bosch အပိုပစ္စည်းများသည်အလွန်စျေးကြီးပြီးဤဆောင်းပါး၌သင့်အားပြပါလိမ့်မည် Bosch လျှပ်စစ်ဖြုတ်စက်များတွင်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှနိုင်လွန်လိုင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း.
ငါ့မှာလျှပ်စစ်ဖြီးဖြတ်စက်ရှိသည် Bosch AFS ၂၃-၃၇ ပါဝါ၏ 1000 W ။ ကောင်းပါတယ် ငါလိုအပ်သောကဲ့သို့သော non-intensive အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်ဝမ်းသာတယ်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဖြီးဖြတ်စက်ဖြစ်ပြီးဘက်ထရီတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်လျှပ်စစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
သို့သျောလညျး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တရားဝင်နိုင်လွန်အပိုပစ္စည်းများသည်အလွန်စျေးကြီးသည်အလွန်ဈေးကြီးပြီးထုတ်လုပ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းင်း၏အပိုပစ္စည်းများကုန်ဆုံးသွားသည်။ ဤကိစ္စတွင်နိုင်လွန်ချည်သည်အလယ်ဗဟိုတွင်မူလီတစ်ခုနှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုမလွတ်မြောက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူပါသောပုံရိပ်ထဲမှာသူမြား € 25 10cm ၏ 30 ယူနစ်၏ pack ကို ဆိုလိုသည်မှာ ၃ မီတာအတွက်ယူရို ၂၅ ဖြစ်သည်။ ကွိုင်တွေက ၆၀၊ ၇၀ မီတာအတွက်ယူရို ၁၀ ရတယ်။ ခြားနားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။
ဒီ ၂ ခုဝယ်လိုက်ပြီ
သင်တို့သည်လည်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်နိုင်လွန်ချည် spools ကိုသုံးပါ ငါသည်သင်တို့ကိုနည်းလမ်းနှစ်ခုထားခဲ့ပါ။
ကျနော်တို့အပိုအစိတ်အပိုင်းများကိုမြင်ရလျှင်သူတို့သေးငယ်တဲ့လူမီနီယံမူလီရှိသည်။ ဖြတ်တဲ့ကေဘယ်ကိုတိုက်ရိုက်တင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ ဘယ်လိုရလာသလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်မြက်ပင်ထဲကျလာရင်ခေါင်းကချော်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသော့ခလောက်ပြန်သုံးသွားကြသည်။
universal head ကိုဝယ်ပါ
ဒါဟာနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်နှင့်အခြားတစ်လောကလုံးသို့မဟုတ်သဟဇာတဖြစ်သော ဦး ခေါင်းတစ်ခုကို ၀ ယ်ပြီးမည်သည့်ချည်မျှင်ကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီခေါင်းအမျိုးအစားများကယူရို ၅ မှယူရို ၁၅ ကြားကြားရှိသည်။
ဦး ခေါင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည် ၃.၅ မီလီမီတာကျစ်လစ်သောဝါယာကြိုးနှင့်သံမဏိကြိုးများကိုလည်း ၀ ယ်သည်။ ၎င်းသည်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်နည်းသောဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
လျှပ်စစ် brushcutter ကကျိုးနပ်လား?
အမြဲတမ်းအဖြေကမူတည်သည်။ သင်လိုအပ်တာတွေပေါ်မူတည်တယ်။ ငါရေလွှမ်းမိုးမှု ၂ ခုရှိသည့်နေရာတွင်၎င်းကိုအသုံးချပြီး extensions များနှင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ငါပြီးသွားတဲ့အခါငါကားထဲကအိမ်ကိုယူပြီးဗီရိုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဓာတ်ဆီနှင့်ရေနံတို့ဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ အနံ့မရှိခြင်းနှင့်မိုက်မဲပုံရသော်လည်း၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်အလွန်အကျွံဆူညံသံမဖြစ်စေကြောင်းနားလည်ထားပါသည်။
သို့သော်သင်ဝယ်ယူသောအရာကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဤအထူးပုံစံ (Bosch ASF 23 - 37) တွင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်လုံခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းတင်းကျပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်နည်းနည်းခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်ကြွင်းသောအရာသည်စုံလင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သာမာန်ပါဝါရှိသောစက်တစ်လုံးလိုအပ်ပါက၎င်းကိုသင်ပြproblemsနာမရှိဘဲချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဆူညံမှုနည်းပါးပြီးအညစ်အကြေးများများမဖြစ်စေနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုမည်။ (ကားကိုမစွန်းထင်းစေရန်သို့မဟုတ်ငါသိမ်းထားသည့်အချိန်တွင်) အိမ်မှာ) ကောင်းပြီ၊ လျှပ်စစ်ကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုလျှပ်စစ်မီးမရှိသောနေရာများသို့သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါက 1CV ထက်ပိုသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်သည်
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်အားမှတ်ချက်များ ပေး၍ သင်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုချဲ့ထွင်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည် လမ်းညွှန်ဝယ်ယူတဲ့ဖြီးရှုး.
categories ပြင်ဆင်မှုများ လက်မှတ်အညွှန်း
"Bosch စုတ်တံဖြတ်စက်များအတွက် စျေးပေါသော နိုင်လွန်ကြိုးကို အစားထိုးနည်း" တွင် မှတ်ချက်2ခု
14:2021 pm မှာသြဂုတ်လ 10, 53
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် AFS 23-37 brush cutter တစ်ခုရှိပြီးအစားထိုးလိုင်းအတွက်လိုက်ဖက်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဦး တည်စေသော link ကိုသင်အပ်ဒိတ်လုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်ကမရနိုင်တော့တာနဲ့အဲဒါကိုဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။
27:2022 pm မှာပြီလ 10, 36
မင်္ဂလာပါ။ ငါ့မှာ ဒီစုတ်တံနဲ့ ကြံတွေအများကြီးပေးတယ်။ အရမ်းကောင်းသွားတော့မယ်။ Amazon မှ 3,5 mm x 124 m၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အသွေး နိုင်လွန်၊ မော်ဒယ်အများစုနှင့် လိုက်ဖက်သော XNUMX mm x XNUMX m” အတွက် Oregon Yellow Round Line ဟုခေါ်ရန် ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အစတုန်းကတော့ အဲဒါအတွက် ဦးထုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ရလဒ်က အရမ်းကောင်းပြီး သူ့ရဲ့မူရင်းခေါင်းပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
2 universal head ကိုဝယ်ပါ
3 လျှပ်စစ် brushcutter ကကျိုးနပ်လား?